A iphupho lapho kukhona izindiza, kubhekwa okuhle kunokuba ezimbi. Ngokuyinhloko, lalifanekisela ukuqaliswa imigomo emikhulu, ukuvula iphupho lakhe libe into engokoqobo. Nokho, uma umuntu uyaphupha mayelana okuhle, Indiza iphahlazeke? Dream ncwadi kuzokusiza uthole impendulo yalo mbuzo, uma lowo mphuphi walelo uyakwazi ukukhumbula umbono ebusuku ngokuningiliziwe. Ngakho, yini okufanele uyilindele kulokho okwakwenzeka enjalo?
Indiza iphahlazeke: Dream Miller
Hhayi incwadi wonke umuntu iphupho acoce izifundo amaphupho ebusuku lapho kukhona Jets. Akumangalisi, ngoba izindiza yasungulwa esanda kutholakala. Ngenhlanhla, lwemibhalo eminingi namanje ukukutjela ukuthi lokho kubonisani iphupho lapho Indiza iphahlazeke. incwadi iphupho likaMiller ungomunye wabo.
Isazi esidumile, idale omunye "iziqondiso" edume kunazo zonke emhlabeni ebusuku amaphupho, uthi indiza sigameko akubikezeli ngephupho. Waking umphuphi nazo inkinga engathí sina, angawa ngisho ku yayisesimweni esingenathemba. Uma umuntu wakhe izilawuli okwakwenzeka falling izindiza, empeleni uzama ukuthatha impilo yakhe ngaphansi kolawulo kukhona ngehluleke. Futhi kungaba avele imisebenzi kuyacasula ukuthi isikhathi eside kuzodala izinkinga ngaye.
Kungakhathaliseki iphupho elingokwesiprofetho
Abantu abahlela ukuba ngokushesha ukwenza air travel kungaba sina bethukile lapho ebona indiza ephusheni siphukile. Dream ncwadi (cishe kunoma iyiphi) kuyozisiza ukuba balahle kokwesaba, elikwaziyo ukwenza ngisho senqabe ukuhamba. I compilers yalezi lwemibhalo kukhona ngazwilinye ethi lokhu okwakwenzeka kuphela ibonakalisa yokwesaba ukuthi ukuphazamisa ubuthongo, nokuvuka uhlangabezana okukhulu umcabango indiza oluzayo. umthwalo semantic ke engekho nhlobo.
Kungani iphupho Indiza iphahlazeke, uma lowo mphuphi walelo indiza ukuthi ngokuphelele hhayi esaba of it? Kungenzeka ukuthi umuntu usanda ababone okwakwenzeka ezinjalo, ngezwa kukhulunywa kuphahlazeka indiza, lilinde nemithelela yayo ku-TV. Ngisho ifilimu nge icebo efanayo Ingabangela ubuthongo lapho kuphahlazeka emoyeni. Ngakho-ke, le lesiprofetho Akubalulekile cabanga iphupho, umoya ezokuthutha ewa 'ngenkosi' ubuthongo ebhodini, lokho akusho azimhambeli ngokoqobo.
Imiphi imininingwane kumelwe bakhumbule umphuphi e okwakwenzeka lapho Indiza iphahlazeke? Dream ncwadi ikhuthaza ababambiqhaza ukudlala kwimemori le ngozi. Lapho ibhodi walo wayenguNkulunkulu ngokwakhe "master" yephupho, ekuphileni kwangempela kuyoba neemraro. Lutho neze umuntu angabhekana ngayo nazo kwayona, ngakho-ke kuhle ukucabangela ukuthi yimuphi imvelo yakhe liyakwazi ukusekela ukuphila, ngisize nge seluleko esihlakaniphile.
Mayelana nengozi ngaphansi uxwayisa okwakwenzeka lapho air zokuthutha iphukile abangabazi ebhodini noma amalungu ukuphahlazeka kwakungenakwenzeka ukuba siqonde. Dreamer alindele nobunzima ezincane ukuthi uzokwazi ukunqoba bebodwa. Uyazicabangela enye indaba ephathelene nabantu ongabazi, iphupho nencazo. Indiza iphahlazeke edolobheni phambi umuntu (the "master" ukulala), lapho eseneminyaka esikhumulweni sezindiza elinde indiza yabo? Dreamer ulindele wokugoqa izinhlelo, njengoba ufuna ukumelwa ngemuva okwanele.
Kubi uma ephusheni izisulu ngengozi izihlobo noma abangani izincwajana. Esikhathini esizayo esiseduze bayoba enkingeni, futhi lowo mphuphi walelo ayikwazi ukuzisiza. Kanti futhi, abantu ababesezweni izindiza iphahlazeka ephusheni bangaba nezibi empilweni yangempela.
Kuthiwani uma lowo muntu ngaphambi komshado dream ukuthi Indiza iphahlazeke? Dream Ukuhunyushwa Kulokhu, uMkhandlu cabanga sekufanele awushiye ngomshado, qiniseka ngokuthi uqotho imizwa umlingani. indaba enjalo akubikezeli, ukuphila komkhaya kusheshe ukudanisa "umnikazi" yephupho, ukuze sibe sibi. Futhi kwakungase pela izithiyo ezingalindelekile ukuthi luvimbele lomshado.
Ophuphayo akufanele kwesokunxele ngaphandle ukunakwa okwakwenzeka lapho izibalo indiza, uma ebona-ke ngosuku olwandulela umhlangano wemfanelo. Bala umphumela omuhle lomcimbi kulokhu ngeke kukusize ngalutho awokuthi ukwehluleka kuthengiselana. Ngeshwa, ukuvimbela lo muntu ngeke aphumelele.
Uma indiza sigameko ivela usomabhizinisi iphupho ngubani uhlose ukutshala iphrojekthi entsha, kufanele ashintshe umqondo wakhe. Kungenzeka ukuthi iphupho uxwayisa ukutshalwa ezingenanzuzo, uthembisa balahlekelwa kakhulu yemali.
Izinsalela of airliner
Ngo okwakwenzeka yakhe lowo mphuphi walelo ayikwazi ukuyoyibona mathupha le mpophoma, air zokuthutha, kodwa kuphela ukuthola izinsalela, bethi Indiza iphahlazeke. Dream incazelo kuleli cala ubikezela enkingeni enkulu yezimali. ukulahlekelwa Monetary kungase kuhlobane iqiniso lokuthi "umphathi" ukulala uwuphathise ukuphathwa kwezimali zabo abantu alithembekile. inhlekelele lwezezimali kungagwenywa uma abantu kuyodingeka isikhathi ukuthatha emuva ukulawula imali yakho wena.
Akuyona into engavamile, futhi elokhu ephupha kabi lapho izinsalela izindiza falling ngqo mphuphi. Lokhu kusikisela ukuthi empilweni yangempela, umuntu umkhumbula omunye ithuba ngemva kwenye, ngakho kufanele kube ngaphezulu iyasebenza, uma sifuna impumelelo.
Uma ucabangela ezinye izindaba ncwadi iphupho. Bheka Indiza iphahlazeke, babutha izingcezwana eziyizinsalela zazo ovuthayo, kusho ukuthi iphupho ophuphayo izohlala iphupho, noma kuye kwenziwa imizamo kubo ukuqaliswa yayo.
Yiziphi ezinye izimo ezihlobene kuwa izindiza, ngokucabangela incwadi iphupho? Indiza iphahlazeke, kodwa abazange bamane batheleke nje, - enye kungenzeka ngesakhiwo okwakwenzeka. Uma inhlekelele uvinjelwe yena elele, njengoba umshayeli wemoto sigameko, ekuphileni kwangempela wayezokwazi ukushaya bonke izimbangi. Kungenzeka futhi ukuthi lowo mphuphi walelo Kutfutfukisa isifo nga which he ubhekane nesimo ngokuphumelelayo.
Yini enye eyoba dream ncwadi? Indiza, kodwa akusho aphule ngaphandle iqhaza ophuphayo - le ndaba ithi ukuphuma nesimo esinzima, abantu ngeke ngiyabonga ukwazi esijabulisayo, usizo kwabanye abantu babe.
Modern iphupho nencazelo futhi uyazicabangela lesi simo njengoba falling izindiza amaphekula ehlasela. okwakwenzeka ezinjalo kungadalwa izenzakalo ezenzeka emhlabeni, uma besaba ophuphayo empilweni yangempela. It kungabonakala nakulokho njengoba isixwayiso ukubonakala isitha ezingaba sina kulimaze umuntu ezingonakalisa idumela lakhe.
Uma umuntu enqaba ukuba bagibele endizeni noma indiza Sekuhlwe ke uyezwa kuphahlazeka indiza, bese leliphupho nzima labizwa ngokuthi zinhle noma zimbi. Kungenzeka ukuthi esikhathini esizayo esiseduze, lowo mphuphi walelo kuyoba isinqumo esinzima, futhi yanquma ukushintsha ngokuphelele Isiphelo sakhe.
Yini iphupho - ukuhlanza emabhilidini
Mos. ZaseScandinavia cuisine yokudlela eMoscow.